Ịchịgharị ehi: Ndigbo asaala onyeisi ndị uweojii - BBC News Ìgbò
Ịchịgharị ehi: Ndigbo asaala onyeisi ndị uweojii
1 Maachị 2018
Image copyright Getty I
Ndị Igbo ọnụ na-eru n'okwu akatọla ọnọdụ onyeisi ndị uweojii bụ Ibrahim Idris nyere a ga-eji kwụsị nsogbu dị n'etiti ndị na-achị ehi na ndị ọrụ ugbo sị na ọ bụ okwu ịchọ okwu.
Unyaahụ, Idris gwara ndị gọọmenti steeti ka ha bụrụ ụzọ mapụta ala maka ọdọ ehi tupu ha amabido ịchịgharị ehi.
Onye chịburu dịka onyeisi otu Aka Ikenga bụ Goddy Uwazuruike gwara onye ntaakụkọ BBC na okwu onyeisi uweojii kwuru bụ okwu ịchọ okwu.
"Onyeisi ndị uwe ojii ekwuteghi ọfụma. O kwughị okwu ka onye nọ na nnụkwụ ọkwa."
Uwazuruike kwuru sị, "Ọ bụ steeti bụ ndị nwere ikike maka ala. Ihe ọbụla ha kwuru maka ala bụ ihe ga-eme. Ị bịa na-agbara ndị na-achị ehi, ihe ọ masịrị ha mee, onweghị ihe ga-enye ha ikike ịga n'ugbo mmadụ ebe mmadụ kọrọ akpụ, ji na ede ịga mebie ya. O kwuteghị ya. Ihe ọ na-ekwu bụ okwu e ji achọ okwu."
Ọ gara n'ihu kwuo na onyeisi ndị uweojii kwesịrị ịkwụsi ike na onye na-achị ehi mebiri ihe onye ugbo kwụ ụgwọ ihe o mebiri.
"Ihe o kwesiri ikwu bụ na onye na-achị ehi na anụ ndị ọzọ agakwala ebe ahụ. I bịa, dowe iwu obodo ahụ, ịda iwu ha, ha ga-ahakwa gị nha. Ọ bụ ihe ejiri mara onye eziokwu. Onye bụ onye eziokwu agaghị na-agba okwu okirikiri."
Ọ sịkwara, "Ị gaghị abịa na Enugwu na-atụrụ ndị Enugwu etu ha ga-ezi mee ala ha. Ichọ Izu ala ga-zuru ala. Ichọ ime ya ọgba ebe a na-azụ ehi, o nwere onye ga-akwusi gị? Obodo ọbụla. I ga Imo steeti, I mekwa otu ihe ahụ."
Onye osote onyeisi otu jịkọrọ ndị ọkaiwu na Naịjirịa bụ NBA n'aha ịchafụ bụ Barr. Monday Ubani kwụnyere Uwazurike n'ihe o kwuru.
N'okwu ya, ọ siri: "O nweghi iwu e nwere nke na-ekwu na ọ bụ iwu ịwapụta ọdọ ehi na steetị. Ebe ọ bụ na-onweghi, ọ bụ ihe dị mgbagwoju anya, dịkwa njọ na onyeisi ndị uweojii ga-amabido ndị steetị inwe iwu megide ịchịgharị ehi. Eleba anya n'iwu ala anyị, o nweghi ike a. Ọ bụ sọọsọ ụlọikpe nwere ikwu na iwu emegidere iwu Naịjirịa."
Onyeisi ndị uweojii enyeela ọnọdụ ịmachị ịchị ehi
'Maka Achuzia, anyị ga-ahụ na Biafra mezuru'
A kpụpụla Melaye ụlọikpe maka ịgba akabe ụgha
Okacharamara n'ihe gbasara nchekwa bụ Emeka Monye kwuru na ọ bụghị ọrụ dịrị onyeisi uweojii ikwu ihe ha ga-eji ala mee.
Dika Monye siri kwuo, "Ọ bụ okwu dịrị ndị gọvanọ na ọgbakọ ndị omeiwu nke steeti na nke gọọmenti etiti ikwu ihe gbasara ala ha. Okwu onyeisi uweojii bụ okwu aghụghọ. ọ dighị mkpa inwe ọgba ebe ana-azụ ehị tupu ị nwuchie ọnye na-achịgharị ehi."
O kwukwara n'ihe ndị uweojii kwesiri ịme bụ nyocha site na-ịnụta kepukepu etu na ebe ndị na-achị ehi na-akwado mkpamkpa.
Tyson Fury akụpụla Deontay Wilder kpakpando n'anya
Onye afọ nri! Lekwa ihe mere ụtọ agwa ji aba n'ụmị
'Ọ bụ amaghị ihe ma onye ọchịchị jiri ụgbọala 20 na-aga n'ụzọ'